MB 2017 Febroary - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Febroary
Amin'ny fiteny anglisy, ny andalana "Ilay vehivavy, araka ny eritreritro, dia nidera ny [anglisy anglisy: fihetsiketsehana] be" dia notsongain'i Shakespeare's Hamlet, izay mamaritra ny olona manandrana mandresy lahatra ny hafa amin'ny zavatra tsy marina. Io fehezanteny io dia tonga ao an-tsaina rehefa maheno an'ireo ateyista izay manohitra fa tsy mino an'Andriamanitra ny ateyisme. Ny sasany tsy mino an'Andriamanitra dia manohana ny fihetsiketsehana amin'ireto fampitahana syllogistic ireto manaraka ireto:
Raha fivavahana ny tsy mino an'Andriamanitra dia "bald head" dia "volo" kosa. Na dia mety ho lalina lalina aza izany, dia fanambarana diso fotsiny no ampitahaina amin'ny sokajy tsy mendrika. Ny loha loha dia tsy misy ifandraisany amin'ny volon-koditra. Azo antoka fa tsy misy loko volo arakaraka ny loha sola, fa satria tsy mino an'Andriamanitra ny tsy finoana an'Andriamanitra dia afaka manana loko toa ny fivavahana hafa, na dia tokana aza izy io. mitovy amin'ny kristianisma io. Ary koa, tsy mbola nihaona tamin'ny olona sahady aho izay tsy manana volo. Raha misy olona tsy manana volo eo an-dohany, dia tsy azonao atao ny maneho azy toy ny hoe tsy misy volon-koditra.
Raha fivavahana ny atheisme dia aretina ny fahasalamana. Araka ny nolazaiko, dia toa fehezanteny mitambatra izany amin'ny voalohany jerena, saingy tsy zavatra hafa afa-tsy ny resaka tsy misy fotony, izay milaza indray ny fampitahàna fanambarana diso amin'ny sokajy tsy mendrika, izay lojika loatra. Tokony hotononiko ihany koa fa ny fandinihana dia nampiseho fa ny finoana an'Andriamanitra dia tsy mifandraika amin'ny tatitra momba ny fahasalaman'ny mpino tsara kokoa, fa koa manatsara ny fahasalamana ara-batana raha oharina amin'ny tsy mpino. Raha ny marina, efa ho 350 ny fanadihadiana ara-pahasalamana ara-pahasalamana ara-pahasalamana ara-pahasalamana 850 ary mandinika ny singa ara-pinoana sy ara-panahy dia mahita fa ny fitaomana ara-pivavahana sy ny toe-panahy dia mifandray amin'ny fanarenana tsara kokoa.
Raha fivavahana ny tsy mino an'Andriamanitra dia ny firaisana ara-nofo. Ary indray, ny fihazonana fanambarana roa mifanohitra dia tsy manaporofo na inona na inona mihitsy. Azonao atao ny manohy mametaka fanambarana vaovao tsy misy dikany. Ny fampisehoana ireo lesoka lojika dia tsy milaza amintsika na inona na inona momba izay tena marina.
Ny fitsarana amerikana ambony indrindra (Fitsarana Tampony) dia namoaka didy tamin'ny raharaha mihoatra ny iray fa tsy maintsy raisina ho toy ny fivavahana araka ny lalàna ny tsy mino an'Andriamanitra (izany hoe finoana voaaro mitovy amin'ny fivavahana hafa). Mino ny tsy mino an’Andriamanitra fa tsy misy andriamanitra. Raha jerena amin'izany fomba izany, dia finoana momba ny andriamanitra izy io ary mahafeno fepetra ho fivavahana, mitovy amin'ny hoe fivavahana koa ny Bodisma.
Misy fomba fijery ara-pivavahana telo momba an'Andriamanitra: monotheistic (Jodaisma, Kristianisma, Silamo), polytheistika (Hindoisma, Mormonisme) ary tsy mino an'Andriamanitra (Boddhisme, tsy mino an'Andriamanitra). Mety hampiditra sokajy fahefatra ho an'ny tsy mino an'Andriamanitra ny olona iray ary hiantso azy io hoe anti-theistic. Ao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny The Christian Post, Mike Dobbins dia mampiseho ny maha-relijiozy ny tsy finoana an'Andriamanitra. Ity manaraka ity dia ampahany (avy amin'ny Atheism as a Religion: Introduction to the World's Least Understood Faith):
Ho an'ny atheista, ny litera 'A' dia tandindona masina izay midika ho tsy mino an'Andriamanitra. Misy famantarana telo lehibe 'A' amin'ny tsy mino an'Andriamanitra. Endrika iray 'A' nohodidinina faribolana ary noforonina tamin'ny 2007 avy amin'ny Atheist Alliance International. Ny faribolana dia natao ho fanehoana ny firaisan'ny atheista sy hampiray ireo marika tsy mino an'Andriamanitra hafa eto ambany. Tsy manao izany izy ireo
ireo famantarana ireo ihany anefa no maneho ny tsy finoana an'Andriamanitra. Misy ny tandindona ara-pinoana tsy mino an'Andriamanitra izay tsy fantatra afa-tsy amin'ny mpanamory na mpivavaka amin'ny tsy mino an'Andriamanitra.
Maro amin'ireo tsy mino an'Andriamanitra no nanazava tamin'ny Krismasy 2013 fa masina ho azy ireo ny marika 'A'. Ao amin'ny tanàna niaviako any Chicago, azo atao ny mametraka ny Hanukkah menorah (fanazavana ho an'ny fetin'ny jiro jiosy) sy ny fandriana Krismasy eny amin'ny toerana ho an'ny besinimaro mandritra ny vanim-potoanan'ny fety. Nitaky àry ireo tsy mino an’Andriamanitra mba hametrahan’izy ireo ny marika ara-pivavahany koa; amin'izany fomba izany no ahafahan'ny fitondrana misoroka ny fiheverana fa tsy mitovy ny fiatrehany ny fivavahana samihafa. Ny Freedom From Religion Foundation dia nisafidy scaffolding misy marika 'A' goavambe, 2,5 metatra ny haavony, misy marika néon mena mba hitan'ny rehetra. Tsy tambo isaina ny tsy mino an'Andriamanitra nanome voninahitra ny 'A' azy ireo tamin'ny fanaovana ilay tranokala ho toerana fivahiniana masina. Tao izy ireo no naka sary ny tenany sy ilay mena 'A'. Maro amin'izy ireo, azoko antoka fa hitazona ireo sary ho fahatsiarovana manokana. Saingy tsy ampy ho azy ireo ilay mena lehibe A. Nahavita izany koa izy ireo ka afaka naneho ny finoany tsy mino an’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fametrahana famantarana misy izao soratra izao: “Tsy misy andriamanitra, na devoly, na anjely, na lanitra na helo. Tsy misy afa-tsy ny tontolo voajanahary misy antsika. Ny fivavahana dia tsy inona fa angano sy finoanoam-poana izay manamafy ny fo sy manandevo ny saina.
Ny bilaogy Debunking Atheists  dia mirakitra lisitr'ireo hevitra fototra tsy mino an'Andriamanitra izay mampiseho mazava ny votoatiny ara-pivavahana.
Ity ambany ity ny dikanteny nohafohezina amin'ny lisitra:
Manana ny fomba fijeriny izao tontolo izao ny tsy mino an'Andriamanitra. Ny materialisma (ny fiheverana fa tsy misy afa-tsy tontolo ara-materialy) dia ny fijeren'ny tsy mino an'Andriamanitra izao tontolo izao. Lavitry ny fisokafana saina, fa ny zava-misy azo porofoina ihany no isaina ho azy ireo; takatr'izy ireo fotsiny ny zava-misy rehetra avy amin'ny fomba fijery ara-materialy tena voafetra.
Ny atheista dia manana ny orthodoxy misy azy. Orthodoxy dia fitambaran'ny finoana natoraly izay noraisin'ny vondrom-pivavahana iray. Tahaka ny misy ny Ortodoksa kristianina, dia misy koa ny tsy mino an'Andriamanitra. Raha fintinina dia azo faritana ho azy ny vokatry ny fivoarana tsy misy fepetra, tsy voafehy ary tsy misy dikany. Izay rehetra milaza ny fahamarinana dia nolavina raha tsy mahatohitra fanamarinana siantifika sy fanamafisana empirical.
Ny tsy mino an'Andriamanitra dia manana ny fombany manokana hanondroana ireo mpivadi-pinoana (mpivadika). Ny fivadiham-pinoana dia mamaritra ny fandavana ny finoana teo aloha. Antony Flew (1923-2010, filozofa anglisy) dia iray amin'ireo tsy mino an'Andriamanitra malaza indrindra eran-tany nandritra ny taona maro. Dia nanao izay tsy azo noeritreretina: niova hevitra. Azonao alaina sary an-tsaina ny fihetsiky ny hetsika neo-atheista "misokatra, mandefitra". Nanendrikendrika ny Flew. Richard Dawkins dia niampanga an'i Flew ho "nanova ny sainy" - teny iray tena tsara ho an'ny fivadiham-pinoana. Araka ny fieken'izy ireo manokana, niala tamin'ny "finoan'izy ireo" i Flew [ary lasa karazana Deista].
Ny mpino ny ateyista dia manana ny mpaminaniny manokana: Nietzsche, Russell, Feuerbach, Lenin ary Marx.
Ny ateyista dia manana ny hafany manokana: Charles Darwin, izay, raha ny fahitan'izy ireo, dia nanosika ilay tsatoka lehibe amin'ny fon'ny teisme amin'ny alalan'ny filazalazana feno fa tsy mila an'Andriamanitra ho mpamorona na fanazavana. I Daniel Dennett aza dia nanoratra boky momba izany miaraka amin'ny tanjona hamaritana ny finoana ara-pinoana ho fivoarana miandalana fotsiny.
Ny tsy mino an'Andriamanitra dia manana ny mpitory teny sy ny evanjelistra azy manokana: Dawkins, Dennett, Harris ary Hitchens (izy ireo no solontenan'ny hetsika neo-atheist indrindra).
Mpino ny tsy mino an'Andriamanitra. Na dia maneso aza ny finoana ny asa sorany (ny bokin'i Harris dia mitondra ny lohateny hoe The End of Faith), ny tsy finoana an'Andriamanitra dia hetsika mifototra amin'ny finoana. Koa satria tsy azo porofoina na tsy azo lavina ny fisian’Andriamanitra, ny fandavana an’Andriamanitra dia mitaky finoana ny fahaiza-manaon’ny siansa momba ny fandinihana sy ny fisainan-tsaina. Ao amin'ny fivoaran'ny tsy mino an'Andriamanitra dia tsy misy fanazavana momba ny fanontaniana hoe "Nahoana izao rehetra izao no voalamina, azo kajy ary azo refesina?" Ny tsy mino an'Andriamanitra dia tsy manana fanazavana ara-drariny ny amin'ny antony mahatonga ny fisainana misaina. Tsy manana fanazavana momba ireo fanontaniana antenainy tsy hapetraka izy, toy ny hoe “Nahoana isika no mihevi-tena ho tia tena? Inona no mahatonga antsika hieritreritra? Avy aiza ny fahatsapan'izao rehetra izao ny tsara sy ny ratsy? Ahoana no ahafantarantsika tsara fa tsy misy ny fiainana any ankoatra? Ahoana no ahazoantsika antoka fa tsy misy na inona na inona ivelan’ny tontolo ara-materialy? Ahoana no ahafantarantsika fa tsy misy afa-tsy ny zavatra toy izany izay azo tsapain-tanana amin'ny fomba ara-tsiansa sy ara-panahy fantatra? Ny tsy mino an'Andriamanitra dia milaza zavatra tsy hay hazavaina amin'ny finoana - miahiahy ny zavatra izy ireo nefa tsy manana fototra marim-pototra na empirika momba izany.
Mifanohitra amin'ny hetsi-panoherana ataon'ireo tsy mino an'Andriamanitra, ny zava-misy ao amin'ny rafi-piraisan'izy ireo dia miorina amin'ny laharam-pinoana miorina amin'ny finoana sy ny fanao ary ny finoana tahaka ny fivavahana hafa. Mampahatahotra ny tsy mino an'Andriamanitra ny tsy mino an'Andriamanitra fa tsy mino an'Andriamanitra ny tsy mino an'Andriamanitra ary maneso ny fivavahana hafa.
Haingana aho manampy fa ny Kristiana sasany dia manao fahadisoana mitovy amin'izany rehefa manilikilika ny fivavahana hafa (ary na dia amin'ny endriny hafa amin'ny Kristianisma aza). Amin’ny maha-Kristianina antsika, dia tsy tokony hohadinointsika fa ny finoantsika dia tsy fivavahana hohamafisina sy harovana. Ny Kristianisma kosa no fototry ny fifandraisana velona amin’ny Andriamanitra telo izay iray: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny antsontsika amin’ny maha-Kristianina antsika dia tsy ny hametraka rafi-pinoana hafa eto amin’izao tontolo izao, fa ny ho amin’ny asa fampihavanana mitohy ataon’Andriamanitra amin’ny maha-ambasadaorony azy (2. Korintiana 5,18-21) - amin’ny fitoriana ny vaovao mahafaly (Filazantsara) fa voavela heloka ny olona, ​​fa voavotra sy tian’Andriamanitra izy, izay mitady fifandraisana amin’ny fifampitokisana (finoana), fanantenana sy fitiavana amin’ny olona rehetra irin’ny fony.
Faly aho fa tsy fivavahana ny tena kristianisma fa fifandraisana.